विविध Archives - Page2of 43 - Purbeli News
Trending # रवि लामिछाने3# छक्का पन्जा2# गुराँसको राजधानी2# तक्मे बुढा1# रुद्र दर्जी1# मुस्ताङ हाउस1# सप्तकोशी1# जेटबोट1
धरान । सिंह चाँहि काठमाण्डौमै रहेको र थोत्रो दरबार मात्र गाँउमा आएको सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले बताएका छन । उनले आफुलाई प्रदेशको भर नभएको र केन्द्रको मात्र थोरै भर भएको उनले बताए । सुनसरीको धरानमा शुक्रबार बिहान आयोजित समुदाय साझेदारी कार्यक्रममा उनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै अगाडि प्रदेशको भर छैन भन्दा मुख्यमन...
उनकाे प्रेरणाले नै मलार्इ पूर्वी नेपाल देखी राजधानीसम्म पूर्यायाे
बाथरुममा कपडा खोल्दै गरेकी युवतीको भिडियो । सामान्यतयाः मानिसहरु यी सुन्दर युवती अब सर्वाङ्गै हुनेछिन भन्ने प्रतिक्षामा एकटक भिडियोमा ध्यान दिइरहेकी हुन्छन् । तर, भारतकी एक युवतीले केटाहरुको यहि कमजोरीमा खेल्दै गहिरो सन्देश दिएकी छिन् । भिडियोको मध्यभागसम्म पुग्दा लाग्छ- यो कुनै बाथरुम एमएमएस हो । हालै केही नायिकाहरुका यस्तै सेल्फी र एमएम...
शम्भु राई हात जोड्दै मिडियामा: प्रकाश सपुतले गित बङ्गाएर मेरो छातीमा छुरा हाने PURBELI TV
पोखराको उत्तमचोकमा बुधबार गोली चलेको छ । गोबिन्द थापामाथी प्रहरीले गोली चलाएको हो । उत्तमचोकमा लागू औषध बोकेर हिडिरहेका जोन भनेर चिनिने गोविन्द थापालाई प्रहरीले गोली चलाएको हो । उनलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीमाथी आइलागेका थापालाई गाली चलाएको बताईएको छ । उनको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ । घाइते थापालाई उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान...
ईटहरीका मेयर द्धारिकालाल भन्छन : रवि लामिछानेले हेल्मेट लाएर प्रश्न सोध्ने दिन आयो (भिडियाे)
ईटहरीका पत्रकार गलत कि मेयर ? (भिडियाे)
ईटहरीका पत्रकार गलत कि मेयर ?
अर्जुन क्षेत्री आफ्नो स्वार्थका लागी जनतामा त्रास फैलाएको खुलासा (भिडियो हेर्नुस्)
विश्व ज्योतिष महासंघका अध्यक्ष डा लोकराज पौडेलले अर्जुन क्षेत्रीले जनतामा त्रास फैलाएर स्वार्थ लुटिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले बास्तविकता नबुभी पछि नलाग्न समेत आग्रह गरे । 'ज्योतिष शास्त्रले ग्रह गतिको आधारमा विष्लेशण गर्ने हो यसरी ठोकुवा गर्ने होइन',उनले भने । पौडेलले आफुलाई पपुलर बनाउन कुनैपनि आधारविना यस्तो भविष्यवाणी नगर्न आग्रह समेत गरेका ...
चितवन । चितवनको रामपुरमा बन्न लागेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि सहयोग घोषणा भएको छ । शुक्रबार भरतपुर गार्डेन रिसोर्टसहित केही व्यवसायीले रंगशाला निर्माणार्थ सहयोग घोषणा गरेका हुन् । रंगशालाको पर्खाल भत्किएको विषय चर्चामै रहेका बेला चितवनबाटै सहयोग घोषणा भएको हो । भरतपुर गार्डेन रिसोर्टले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले बनाउ...
अन्तर्वातामै मसान बेलाएर अधोरी बाबाले तर्साए, बाबासंग भुत प्रेत किचकन्य र बोक्सीका कुरा (भिडियो)
पोखरा बगरमा रहेको गाईघाटमा बिगत लामो समय देखी एक अघोरी बाबा बस्दै आएका छन् । मसान घाटमै आफ्नो दिनचर्या गरेका उनी पछिल्लो समय आत्यात्मीक शक्ति अनुसन्धान केन्द्र खोलेर त्यसमा लगाी परिरहेका छन् । पञ्चासेको लेकमा गएर सात बर्ष तपस्या गरेको बताउने सप्तचण्डी बिक्रमनाथ बाबा झारफुक र जडिबुटीबारे पनि काम गर्छन् । निकै आध्यात्मीक देखिएका बाबा हामीले अन्तरवार्...